Nyora Nokuti Date My Pet
Join chikwata kwedu kukuru mipiro.
Tiri kugara kubvuma nyaya huru vanyori, bloggers uye vanyori freelance. Nokuti pfungwa zvatiri kutsvaga, tapota verenga kuburikidza vamwe nyaya yacho. Izvi ndichakupawo pfungwa matauriro edu uye mhando nyaya kuti vakashanda zvakanaka vateereri vedu.
Vamwe vakawanda mashoko:
zvatakasarudza pamusoro Nyaya bhuku kunobva kukosha uye suitability neimwe nyaya nomumwe.
Kana tinobvumirana kubudisa wako Nyaya yokutanga, ipapo tsamba chibvumirano zvichabviswa rinosainwa pamberi muripo yakaitwa panguva zvazvingava edu iyezvino nerimwe nyaya. Izvi haringavi chibvumirano kuti zvakazoitika submissions zvichabviswa ichibudiswa. zvakazoitika submissions dzose bhuku hwuchavapano pasi kukosha uye suitability neimwe nyaya nomumwe.
chipfuro vateereri vedu US pamusoro 18 vasina vakuru.
With zviduku Kakawanda, nyaya dzinofanira kuva pakati 600-1000 mashoko.
Mazita okuremekedza kugutsikana kuti vakashanda zvakanaka adjectives simba, nhamba (semuenzaniso mazita) uye mibvunzo.
All submissions Nyaya ANOFANIRA kuva yepakutanga uye kumbobvira rakabudiswa pamberi.
Writers vanogona vasanangurwa kuva vanyori mweya kana kuva kwavo Profile yakabudiswa panzvimbo.
Kuzviisa pasi nyaya kukurukura, tapota nyorerai paemail nyaya kuti:
pasi AT datemypet.com
CHERECHEDZA: Submissions kubva sangano kana rokutengesa ichakurukurwa pasi isiri akabhadhara hwaro
How kukwezva anotaura noMukadzi Dreams Your
pamusoro 5 Chick Flick Movies For Lovers
Sei Unoziva Muri In Love?
Zvakanaka adanane A Man Married?